Ihonjiswe kakuhle ngesitayela esiphakamileyo
Little Thetford, England, United Kingdom
I-Pear Tree House Studio ibonelela ngendawo yokuhlala elungele izilwanyana eLittle Thetford, nje iikhilomitha ezi-3 emazantsi e-Ely. Indawo yokuhlala iqhayisa ngokujonga igadi. Indawo yokupaka yabucala yasimahla inikezelwa. I-WiFi yasimahla iyafumaneka kulo lonke ilizwe.
Ipropati inomnyango wayo wokungena. Phezulu kwizinyuko kukho igumbi lokuhlala / igumbi lokulala, kunye neTV, iSofa kunye netafile yokunxiba. Ukusuka apho kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawari phezu kwebhafu. Iitawuli kunye nelinen yokulala zinikezelwa.
Le ndawo ikumgama oziikhilomitha ezi-3.2 ukusuka e-Ely Cathedral kunye neCambridge kumgama oziikhilomitha ezili-14, ngelixa iBury St Edmunds ikumgama oziikhilomitha ezingama-30. Unxweme lwaseNorth Norfolk lunokufikelelwa kwiikhilomitha ezingama-45. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane yiLondon Stansted Airport, iimayile ezingama-45 ukusuka ePear Tree House Studio.
Uluhlu lwemisebenzi lunikezelwa kwindawo, efana, ukuloba, ukuhamba ngeenqanawa kunye nokuhamba.
Izibini ngakumbi ziyayithanda indawo yethu kwaye sinikwe i-9.8 kwi-10 kule minyaka mibini idlulileyo nguBooking.com.
Le propathi ikwalinganiselwe ngelona xabiso lilungileyo e-Ely! Iindwendwe zifumana imali eninzi xa zithelekiswa nezinye iipropathi kwesi sixeko.
IPear Tree House Studio yamkela iindwendwe ze-Booking.com ukusukela nge-16 Jun 2017.
Le ndawo ibekwe kwilali entle ezolileyo yaseCambridgeshire, kumgama nje omfutshane ukusuka kwidolophu enkulu yase-Ely
I work in oncology research and live near Ely in Cambridgeshire with my wife, children and our dogs.
Siyakubulisa ngokobuqu ekufikeni kwakho kwaye siya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho